Tsy Midina An-dalam-be Fotsiny Ihany Ireo Kroaty Mpiaro Ny Zon’ny Vehivavy Fa Manova Anarana Azy Ireny Ihany koa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Avrily 2015 17:40 GMT
Fitopolo taona aty aorian'ny nahafahan'ireo vehivavy Kroaty nifidy, ankehitriny nifidy ny vehivavy Filoham-pireneny voalohany izy ireo. Indrisy anefa, sarotra ny hitady vehivavy Kroaty sahy hijoro hilaza amin'ny fahatokiana tanteraka fa ny Filoham-pirenena Kolinda Grabar-Kitarovic dia tena hanome lanja ny zon'ny vehivavy ao. Mifanohitra amin'izany aza, ny politikan'ny Filoha amin'ny antoko elatra havanana dia toa mifanipaka tanteraka amin'ny maro amin'ireo zo takian'ny vehivavy.
Nisy fiantraikany ratsy tamin'ny toekaren'i Kroasia ny krizy iraisam-pirenena, ka izany no mahatonga ny governemanta hampiroborobo ireo politikam-pitsitsiana vaovao isan-karazany. Politika izay misy fiantraikany tsy voafetra tokoa amin'ireo vehivavy satria ry zareo no tena betsaka amin'ireo mpitaky izany (indrindra fa ireo reny tsy manambady, noho ny fanomezan'ny fitsarana ny zaza ho azy ireo aorian'ny fisarahana). Ary satria nahenan'ny governemanta ny tombontsoa ara-tsosialy, elingelenin'ireo mpandàla ny fomban-drazana ao Kroasia ihany koa ny fanafoanana ny zo fandrindrana fiterahana sy ny ara-pananahana.
Ny 7 Marsa, nanao hetsi-panoherana tao Zagreb renivohitra Kraoty ihany koa ireo fikambanana mpiaro ny zon'ny vehivavy, teo ambanin'ny teny faneva hoe “Andron'ny fanoherana : Lavina ny Fepetra Fitsitsiana“. Ny tanjon'izy ireo dia ny hampibaribary fa mbola mitohy hatrany ny tolona hisian'ny fitoviana ara-tsosialy, politika ary toekarena eo amin'ny lahy sy vavy.
Ary tao Split, ny Cenzura Plus, fikambanana iray tsy miankina amin'ny fanjakana, dia niaraka taminà mafana fo folo nanao fihetsiketsehana nanoloana ny hopitaly hanasongadinana ny maha zava-dehibe ny safidy malalaka raha ny momba ny fandrindrana ny fiterahana eo amin'ny vehivavy . Nitondra sora-baventy maro nahitàna hafatra mavesatra izy ireo, toy ny hoe , “Ny herisetra lehibe indrindra eo amin'ny fiarahamonina dia ny tsy firaharahiana “, “Tsy hiverina intsony amin'ny fanalàn-jaza tsy ara-dalana izahay”, “Miady ho an'ny zo ananan'ny vehivavy tsirairay ireo Mpiaro ny vehivavy”, ary “homany ny làlanay hahazo fandrindrana fiainam-pianakaviana, fanabeazana ary hiady hampitsahatra ny herisetra atao amin'ny vehivavy “.
Ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy dia famantarana ny tolona ataon'ny vehivavy ho amin'ny fivoarana ara-toekarena sy ny maha olombelona. ilay andro izay ankalazaina maneran-tany sy anaty aterineto (jereo ilay tetikasa Web Women Want, izay mitanisa vehivavy efa ho 100 mpikirakira tranonkala mikasika ny fahitàn'izy ireo ny aterineto), zatra nanana firehana politika maro. Amin'izao fotoana izao, dia matetika lasa fotoana fanehoana fitiavana an'ireo vehivavy izy io.
Vehivavy ny 49.6% ny mponina ao Kroasia. Araka ny fanambaran'ny The World's Women 2010: Trends and Statistics Report, (Ny Tontolon'ny Vehivavy 2010: Tatitra momba ny Fironana sy ny Antontanisa) dia misy 57 tapitrisa mihoatra ny vehivavy ny lehilahy maneran-tany. Araka ny antontanisa, io fitongilanana io dia betsaka kokoa ao Eoropa. Maneho ny tatitra fa :
Saika ny vehivavy rehetra manerana an'i Eoropa no miatrika olana toy izany. Tsy fisian'asa, karama ambany, fefy tsy hitamaso, ary mazàna voahilika eo amin'ny fiainam-piarahamonina sy ny politika. Araka ny voalazan'ny Vohikalan'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy, no lohahevitra amin'ity taona ity dia ny hoe “Ataovy izay hahatanterahana azy “. Eto dia iriana indrindra ny haneken'ny vehivavy manerantany io fanamby lehibe io ka, araky ny nolazain'i Mahatma Gandhi, ho ilay fiovàna tian-dry zareo ho hita manerana izao tontolo izao.